सरकारी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरेर 'गुप्तबास'मा राउत: ढोकामा भित्रबाहिरै ताला, निजी सुरक्षा !
जनकपुरधाम – स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक डा. सीके राउतले सरकारले उपलब्ध गराएको निजी सुरक्षा गार्ड फिर्ता गरिदिएका छन् ।
गत फागुन २६ गते जनकपुरधाम आइपुगेका राउतको सुरक्षाका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाबाट खटाइएको दुई जना सुरक्षाकर्मीलाई राउतले आफ्नो घरमा प्रवेश गर्न नदिएको पाइएको छ । प्रहरी सहायक निरीक्षक मेरुलाल यादव र प्रहरी जवान अमित सिंहलाई सरकारले राउतको सुरक्षामा खटाएको थियो । तर राउतले दुवैलाई फिर्ता गरिदिएको खुलासा भएको छ ।
‘गत आइतवार राउतसँगै उनको निजी निवासमा ती सुरक्षागार्ड पनि प्रवेश गर्न खोजेका थिए,’ एक जना सुरक्षाकर्मीले लोकान्तरसँग भने, ‘तर तपाईंको सुरक्षाको हामीलाई अहिले आवश्यकता छैन भन्दै राउतले प्रवेश गर्न दिएनन् ।’
‘राज्यले खटाएकाले सुरक्षा दिनु आफूहरूको दायित्व भएको भन्दै उनीहरू भित्र छिर्न निरन्तर प्रयास गरेका थिए, तर उनीहरूलाई रोकियो,’ ती सुरक्षाकर्मीले थपे ।
‘सुरक्षा नै दिनु छ भने घरबाहिर सुरक्षा प्रदान गर्नुस्,’ राउतको घरका निजी पाले तथा सहयोगी समेत रहेका एसएन मण्डल भनिने व्यक्तिले घरनजिकै रहेको मन्दिरतर्फ इंगित गर्दै भने, ‘त्यही मन्दिरमा बसेर बाहिरी सुरक्षा दिनुस्, घरभित्र सुरक्षाको आवश्यकता छैन ।’
सामान्यतया सरकारले खटाएका सुरक्षाकर्मी सुरक्षा थ्रेट भएको मानिससंगै बस्ने गर्छन् । तर राउतले उनीहरूलाई घरमा प्रवेश गर्न दिएनन् । सुरक्षाकर्मीले राउतको गतिविधिमाथि निगरानी गर्नसक्ने भयका कारण उनीहरूलाई प्रवेश नदिएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) शेखर खनाल भने त्यसो नभएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले एकजना असई र एकजना प्रहरी जवानलाई उनको मुभमेन्ट तथा गतिविधि निगरानी गर्नका साथै सुरक्षा प्रदान गर्नका लागि खटाएको हो,’ एसपी खनालले लोकान्तरसँग भने, ‘पीएसओ नै भनेर त खटाएको होइन, तर सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन र राउतमाथि निगरानी समेत राख्नका लागि खटाइएको हो ।’
ती दुवै जना सुरक्षाकर्मी राउतको घरमा नबसेको कुरा स्वीकार गर्दै एसपी खनालले थपे, ‘हामीले खटाएका सुरक्षाकर्मी राउतको घरनजिकै रहेको बलवा टोलस्थित प्रहरी चौकीमा बसिरहेका छन् ।’ त्यही चौकीबाट राउतमाथि निगरानी गरिएको उनले बताए ।
गत आइतवार राउत जनकपुरधामस्थित विमानस्थलमा आउँदा धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीपराज कणेल पनि विमानस्थलमै थिए । त्यहाँ उनकै सामुन्नेमा राउतका कार्यकर्ताले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध नारा लगाएका थिए । फ्री मधेशको झण्डासहित र्‍याली समेत निकालिएको थियो ।
मोटरसाइकलमा रहेका ट्राफिक प्रहरीले सडक बाटो क्लियरेन्स गर्दै अगाडि गइरहेका थिए भने बीच–बीचमा नेपाल प्रहरीको भ्यान समेत थियो । ४ बजे निकालिएको उक्त र्‍याली करीब २ घण्टासम्म जनकपुरधामको परिक्रमा गर्दै राउतको निवासमा पुगेर समापन भएको थियो ।
राउतलाई स्वागत गर्न कार्यकर्ताका अतिरिक्त गठबन्धनका केन्द्रीय सह–संयोजक कैलाश महतो, केन्द्रीय सदस्य चन्दन सिंह, सञ्जय यादव, सुदीप सिंह कुशवाहा, गैर–आवासीय मधेशी संघका सदस्य निर्मल मण्डल लगायत विमानस्थल पुगेका थिए ।
प्रहरी प्रशासनकै सामुन्ने अखण्डताविरुद्ध नाराबाजी, झण्डा, प्लेकार्ड र सुरक्षा दस्ता समेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी कणेलले समेत देखेका थिए । तर उनले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न कुनै प्रयास गरेनन्, उल्टै राउतलाई प्रहरी एस्कर्टिङ प्रदान गरिएको थियो । ‘खुला राजनीतिमा अवतरण भएपछि सुरक्षा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो,’ प्रजिअ कणेलले भने, ‘उनलाई सम्मानपूर्वक सुरक्षा प्रदान गर्नु दायित्व भएकाले नै सुरक्षा दिएका हौं ।’
व्यक्तिगत सुरक्षा गार्ड देखिनु भने राम्रो नभएको उनले बताए । ‘उनीहरूसँग हतियार भने थिएन । मैले तत्कालै समन्वय गरेर त्यसो नगर्दा राम्रो हुन्छ, त्यसले नराम्रो सन्देश दिन्छ भनेकै थिएँ,’ कणेलले भने । राउतले नभने पनि लहलहैमा कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरेको बुझेर आफूहरूले संयमता अपनाएको उनको जिकिर छ ।
राउतलाई सुरक्षा थ्रेटको अवस्थालाई आंकलन गर्दै उच्च र मध्यम तहको सुरक्षा प्रदान भइरहेको उनले बताए । राउतसँग भेटघाट नभए पनि सुरक्षा समन्वय उनीसँग भइरहेको र उनको गतिविधिबारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी भइरहेको उनले दाबी गरे ।
राउत बस्दै आएको घरमा अहिले कुनै चहलपहल छैन । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ८ बलबा टोलस्थित सूर्यनारायण यादवको घरमा उनी बस्दै आएका छन् । सप्तरी राजविराजका यादव विगत ४ वर्षदेखि दोहा कतारमा इञ्जिनियरिङ पेशामा कार्यरत रहेको बताइएको छ । तीनतल्ले घरमा राउत आफ्नो परिवारसँग बस्दै आएका छन् । घरमा ठूलो पर्खालमा तार सहितको छेकवार लगाइएको छ ।
घरमा चारैतर्फ सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरिएको छ । उक्त घरको प्रवेशद्वारमा बाहिर–भित्रबाटै ताला लगाइएको छ । प्रत्येक ढोका र ग्रिलमा ताला लगाइएका छन् । तालैताला भित्र राउतको परिवार बसिरहेको छ ।
घर अर्कै व्यक्तिको नाममा भएपनि सो घर राउतकै भएको स्थानीय बताउँछन् । सो घर बन्ने बेलामा राउत आफैं सक्रिय थिए । राउतका तर्फबाट एनएस मण्डलले घर निर्माणको रेखदेख गरेका थिए ।
उनको घरमा पुग्दा उनका सहयोगी मण्डलको फोन नम्बरमा कुरा गरेर मात्रै भेटघाटको समय लिन ढोकामा सूचना टाँसिएको छ । मण्डलले भने, ‘अहिले डाक्टर साहेब आराम गर्न चाहनुभएको छ । केही दिनपछि उहाँले आफैं मिडियालाई बोलाएर कुरा गर्नुहुन्छ ।’